မြန်မာလို E-Books ၀ယ်မယ်။ — MYSTERY ZILLION
မူလ › Sale › Book Sale
268 Mobile Devlopment
27 other mobile
မြန်မာလို E-Books ၀ယ်မယ်။
March 2009 edited January 2010 in Book Sale
မြန်မာလ ိုe book တွေ ရ ရင် ဝယ် မယ် (IT နော်)
အွန်လိုင်းကပဲဒေါင်းပါကွယ်.. အများကြီးပါ.. ကျွန်တော်ဆိုဖတ်တောင်ဖတ်နိုင်ဘူး
မနှစ်က စေတန့် ဘလော့လုပ်နည်းကို စာအုပ်ထုတ်ပြီး ကိုရီးယားမှာ ပြန်ရောင်းစားတယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်။ အဲဒါမီကိုတို့ အဖွဲ့လားမသိဘူး။ :71::71::71:
အဒါဆို send to me
miko korea မှာတရောက်ထဲနေပါတယ် အဖွဲ့မရှိပါ
နည်းပညာစာအုပ် တွေလိုခြင်တာလေ ရသမျှလိုချင်တာ
အလကားရတာကုန်ပီ လေ ဝယ် မှ ရတော့မှာပေါ့
ကိုတတ်တဲ့ ပညာ ကို ဝင်ငွေရတဲ့ အလုပ်မှာ သုံး လို့ရ တာပေါ့
ရေးပေးချင်ရဲ့သား နဲ့ pc မ ရှိလို့ မရေး နိုင်သူ တွေ (internet caffee မှာရေးမယ်ဆို pc ဖိုးပြန်ရတာပေါ့):5:
google မှာ ebooks လို့လိုက်ရှာလိုက်လေကွယ်...
နာ့..မှာတော့ ့မြန်မာလို အီးဘုတ်လေးတွေများ ဖတ်ရတော့မလားဆိုပြီးတော့မှ အားတက်သရောစောင့်လိုက်ရတာ..အခုတော့ အဟင့် (အဟင့် (ဂူးဂဲလ်မှာရှာတဲ့...
မြန်မာလိုရေးထား တဲ့နည်းပညာအခြေခံစာ အုပ် တစ်ရာကျော်ရှိပါတယ်(အဟောင်းများပါတယ်) လိုရင်တောင်းကြည့်ပါ
copy & paste လုပ်ထား တာတွေ ပါလို့တင်မပေးရဲပါ
mikozan wrote: »
မြန်မာလိုရေးထား တဲ့နည်းပညာစာ အုပ် တစ်ရာကျော်ရှိပါတယ်(အဟောင်းများပါတယ်) လိုရင်တောင်းကြည့်ပါ
KO LAY MYAT
I want to CSS and Java script myanmarebooks.
Hi Mr. Mikozan, Please give me. Thank you . Obama
Mikozan ရေ .................
ဗမာလူမျိုးက အလကားရရင် ဂေါ်ဇီလာကြီးတောင် အိမ်မှာခေါ်မွေးတတ်တယ်နော် .....
ပညာဒါန လုပ်လိုက်ပေါ့ ... ကုသိုလ်ရပါတယ် .... :5:
အစ်ကို့မှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေကို ဖြစ်နိုင်ရင် list လေးလုပ်ပေးပါလား
zip တို့ rar တို့နဲ့ဆိုရင်လဲ password တွေဘာတွေပါရင် ပေးခဲ့ဦးနော်
ဆွဲပြီးတော့မှ password ကြီးနဲ့ဆို သေရော:D
KO LAY MYAT wrote: »
java ကတော့ (sandaag) ရေးတဲ့book ရှိပါတယ်
css ကတော့ MZ ကအကိုကြီး ရေးထားတာရှိပါတယ်
e mail ကနေပို့ပါမယ်
ကျွန်တော်လည်းလိုချင်ပါတယ်အစ်ကို ၊ မြန်မာလိုဆိုအချိန်သိပ်မကုန်ဘူး ...:).....
ယူပါမယ်။ [email protected] ကို ပို့်ပေးပါ်။
C++ and Win32 programming မြန်မာ ebook အဲဒီမှာရှိပါတယ်...
ဟိဟိ... ကို mikozan က စာအုပ်၀ယ်မို့ဆိုပီး.. တင်လိုက်တာ..အခုတော့ စာအုပ်ဖြန့်ချီရေးနေရာ ဖြစ်တွားပီ...
ကောင်းပါတယ်လေ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့... :6:
အဲဒီမှာ ebooks လိုချင်သူများ အခမဲ့ Download ဆွဲနိုင်ကြောင်းပါ။
IT သီးသန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အစုံပါပဲ ... အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ ... ကလေးကာတွန်းကအစ၊ရှားပါးစာအုပ်တွေပါရနိုင်ကြောင်း .........
ကျနော့်အနေနဲ့ mikozan ကိုအကြံတခုလောက်ပေးချင်ပါတယ်
အစ်ကိုပေးချင်တဲ့ ebook တွေကို တနေရာရာမှာတင်ပြီး link လေးတွေရေးပေးပါလား
တယောက်ကတောင်းလိုက် အဲဒီတယောက်ဆီ မေးပို့လိုက်
နောက်တယောက်ကတောင်းလိုက် မေးပို့လိုက်နဲ့ဆို အစ်ကိုအတွက်အချိန်တွေကုန်လွန်းပါတယ်
ကျနော် list မတင်တာက list မှာရှိတာပဲလာလာတောင်းရင် တခြားဘာလိုခြင်လဲဆိုတာ ဘယ်သိရတော့မှာလဲ
email ကိုခေါ်တာကလဲ ဘယ်သူတွေ ဘယ်စာအုပ်ကိုဘာကြောင့် လိုခြင်လဲဆိုတာသိခြင်လို့ပါ
လူအများစုစိတ်ဝင်စားပီး လိုအပ် မှူ့ အများဆုံးစာအုပ်ကမြန်မာလိုမရှိသေးဘူးဆိုရင်
ကျနော်လည်း ကျနော့်ရှိတဲ့ မြန်မာ ebook လေးတွေကိုလည်း. တင်ပေးပါ့မယ်.. ကျနော့်ဆီမှာက IT နဲ့ပါတ်သတ်ရင် english ကပိုများနေတယ်.. မြန်မာလိုက ၀တ္ထုစာအုပ်တွေလောက်ပဲရှိတယ်.
စနေမောင်မောင်စာအုပ်ဖတ်ချင်တယ်ဗျာ။[email protected] om
ရှာပေးတာတွေ ့ဘူးဗျ။ မင်းသိင်္ခ ရဲ ့တစ်ခြားစာအုပ်တွေပဲတွေ ့တယ်။
ကျွန်တော့်မှာတော့အုပ် 200 ကျော်ရှိတယ်....
ကောင်က [email protected] ပါ။:6:
window xp registry ကိုမြန်မာလိုလေးရှိရင်လိုချင်ပါတယ်
registry ဆိုရင် ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ
bluerays wrote: »
မြန်မာလိုရေးထားတဲ. စာအုပ်တွေ ရရင် ကျွန်တော် လည်းလိုချင်တယ်။
[email protected] ပါ
အဲ နည်းပည်ာ စာအုပ် ကိုပြောတာနော်
တခြားရ သစာ အုပ်တွေတော. ကျွန်တော် မှာ 200 ကျော်၇ှိတယ်။
ကျွန်တော်က အင်တာနက်ကဖေးမှာ အလုပ်လုပ်နေတာပါ။ ကျွန်တော်ဆီမှာ သုံးနေတဲ့ user တွေမှာ အများစုက chatting ထိုင်တာကလွဲပြီး ဘာမှ မတတ်ကြဘူးဗျာ။ သူတို့က သင်တန်းလည်း အချိန်ကုန်ငွေကုန်ခံပြီးမတက်ချင်ကြတာမျိုး များတယ်။ တစ်ခုတော့ ချီးကျူးတယ်ဗျာ။ သိချင်စိတ်ကလေးတွေတော့ ရှိကြပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော် ပြသနာတက်ရော။ ဟိုကခေါ်မေး ဒီကခေါ်မေးနဲ့။ ကျွန်ပြူတာ အခြေခံတောင်မရှိတဲ့သူတွေကို Gmail, Facebook, tagged, အစရှိတဲ့ အရာတွေကို တစ်ယောက်ချင်းရှင်းပြရင်း အကြံတစ်ခုရတယ်။ ကျွန်တော် ဆိုင်မှာ free သင်တန်းပေးမယ်ပေါ့။ အင်တာနက် အခြေခံနဲ့ window XP ( ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုနည်း ) အခြေခံ သင်ပေးမယ်ပေါ့။ အဲဒါ ကျွန်တော်က သုံးပဲသုံးတတ်တာ။ မသင်ပေးတတ်ဘူး။ ဒီတော့ မြန်မာလို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သင်လို့ရမယ့် စာအုပ်လေးတွေ ပို့ပေးကြပါ။ သူတို့ လည်း ပညာတတ် ငွေကုန်သက်သာ၊ ကျွန်တော်လည်း ကုသိုလ်လေးရအောင်ပါ။ ကူညီကြပါ။
[email protected] ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် mz မှာ နေတာ ကြာပါပြီ...contribute တစ်ခါမှ မလုတ်ဖူးပါဘူး...ဘာမှ မသိလို့ပါ:) ဒာခု hacking မြန်မာလို book လေးရထားလို့ share ပေးချင်လို့ပါ...ကျွန်တော်ဆို hacking 2009 ကို ဖတ်ပြီး content မှာတင် ခေါင်းတွေမူးလာလို့...ဟီး ဒီ စာဒာုပ်လေး ဖတ်ကြည့်ကြပါဒာုံးနော်...တော်တော် လေး ကောင်းပါတယ်....။
pass : mmso.org
ရပါတယ်။ အစ်ကို... ကျွန်တော် အီးမေလ်ကို ပို့ပေးလိုက်ပါ။ အထူးသဖြင့် networking နှင့်
ပတ်သက် သမျှ ရှိရင် ပို့ပေးပါ။ ကျွန်တော် အီးမေလ်ကို အစ်ကိုသိပါတယ်။ ကျေးဇူးဘဲနော်...:P:P
Charming Aung wrote: »
အစ်ကို ရဲ့...စေတနာက လေးစားစရာဘဲ...။ ကောင်းပါတယ်။ အစ်ကို အင်တာနက်ဆိုင်လေးညွှန်းပေးပါအုံး။ သင်တန်း တက်ချင်တဲ့သူတွေကို အစ်ကို ဆီပို့ပေးမယ်။ (အလကားနော်..) ကျွန်တော်ဆီမှာ တော့ သိပ်မရှိဘူးရှာကြည့်ပါအုံးမယ်။ ရှိရင် အီးမေလ်ပို့ပေးမယ်။:d
ကျွန်တော် ifile.it မှာတင်ပေးထားပါတယ် ။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့်မှာရှိတဲ့ မြန်မာလို E-books များ တင်ပေးထားပါကြောင်း ....
January 2010 edited January 2010 Registered Users
File expired ဖြစ်နေပါတယ် အားရင် ပြန်တင်ပေးပါဦးနော်
ကောင်လေး528 wrote: »
download ဆွဲတော့ file not found တဲ့ :2: ပြန်တင်ပေးလို့ရရင်ပြန်တင်ပေးပါအုံး။
snifferhein wrote: »
အစ်ကိုရေ ၊ သေချာ ပြန်စစ်ကြည့်ပါအုံး ၊ လင်ခ့် က အကောင်းကြီး ရှိပါသေးတယ် ။